Waraanni Liyyuu Haayil Haaleellaa Nu Irratti Bane: Jiraattoota – Kichuu
HomeAfaan OromooTVWaraanni Liyyuu Haayil Haaleellaa Nu Irratti Bane: Jiraattoota
WAASHINGITAN, DIISII — Godiina Baalee aanaalee gammojjii keessaa tokko kan ta’e Daarim keessatti jiraattoota humnootii bulchiinsa naannoo shaniin haleelaman shan keessaa tokko lubbuun darbuu jiraattonni ni dubbatu.Angawaan aanaa kana mirkaneessanii jiru.
Godiina Gujii keessattis Dilbata kaleessaa Liyyu Haayil haleellaa gaggeesseen mada’anii hospiitaala Nagallee kan geeffaman keessa a diigdama ta’uu akkasumas tokko hospitaala geeffamaa ituu jiru lubbuun darbuu beekamee jira.kanneen kaleessaa mada’an dabalatee waluumaa galatti mada’anii hospitaala Nagalleetti yaalamaa ka jiran digdamii torba ta’u hojii gaggeessaan hospitaala Nagallee Obbo Gizaachoo Roobee ibsanii jiru.
Gama kaaniin Haarargee bahaa aanaa cinaaksan bakka Daarim jedhmtuttis jimaata darbee haleellaan gaggeeffamee lubbuu nama tokko darbee ibsamee jira.
Qophii Addaa ONN : Mana hidhaatii dhihoo hiikamanii ammas hidhatoota mootummaan mana isaanii butamanii Lafa buuteen isaanii Kan dhabame profeeseer Bayyaanaa Ruudaa ilaalchisee qophii qindeeffame. Adooleessa 15/2018
Haasawa Qeerroo #Baddannoo fi Dhaamssa Goticha Keenyaa. #Nasraddin Aliyyii mee dhaggefadha.
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Dr. Abiyyi Ahimed, kutaalee biyyattii adda addaa keessatti, “humnoota walitti-bu’insoota kakaasaa jiran” ittiin jedhaniin, gochaa isaanii kana irraa akka of deebisan hubachiisanii jiran.
Ministarri Ittisaa fi Poolisiin federaalaa, driqama heraan itti kenname akka bahatanis ajaja kennanii, mootummaan federaalaa akka biyyattii tasgabbessuus mirkaneessan.
Abdii ifaa fuula biyyattii dura jiru dukkaneessuu humnoota hawwaniif, uummanni carraa kennuu hin qabu – jechuun waamicha dhiheessanii jiran. Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa